Dabayl xoogan oo ka dhex socota ONLF – Rasaasa News
Dabayl xoogan oo ka dhex socota ONLF
Warar xog ogaal ah oo aan ku helay e-mail, waxay tibaaxayaan in uu labo u qaybsanyahay ururka ONLF, oo ay hore uga tageen kooxo nabad la galay Atoobiya.
Maxamed Cumar Cismaan ayaa wuxuu muddo la tacaalayey inuu ka hortago mawjado mukhuursan dhalinyarta taageerta halganka ONLF. Kuwaas oo isku magacaabay Kaadirka Isbadal Doonka ah.
Kaadirka isbadal doonka ah, waxay istustay in loo baahan yahay badbaadada ONLF, ka hore inta uusan magaca halganka ururka meesha ka bixin. Dhalinyaradan ayaa isu arka in ay yihiin lexejeclaha halganka iyo mustaqbalka qori isu-dhiibka ah ee taxanaha taariikhda Ogadenia.
Fekirkaas oo bilowday badhatamihii sanadkii 2012, ayaa qarsoon ilaa iyo haatana, laakiin dhaqdhaqaaqiisa laga dhex dareemay taageerayaasha halganka ONLF. Waxaa jira dareen ah in ay lug ku leeyihiin masuuliyiinta golaha dhexe ee da,a dhaxaadka ah.
Kaadirka Isbadal doonka ah, ayaa qaba aragti ah in shacabka Somalida Ogadenia ayna necbayn halganka, laakiin ay jirto isbadal la,aan iyo feker la socda dareenka dadka iyo isbadalka siyaasada geeska Afrika, taas oo muujinaysa nolol la,aanta ONLF. Waana mida keentay in Atoobiya ay qaadato shacabkii taageeri jiray halganka.
Waxaa kale oo la is tusay in arinkaasi dib u cusboonaysiin karo tiiro dheer oo uu qaatanta 90° halganka ONLF, kaas oo keeni kara taageero gude iyo dibad hubaalna ay tahay in lagu hanto guusha gobonimada oo maanta aduunku ka dharagsan yahay.
Ina timacas taygay dhashay iyo taransigii Uubis
Iyo toosaneey ina siyaax tumashadii baarcad,
Sangayaal takooraan jiriyo tu,aan la gaadhaynin,
kolku geelu taako u jiray kor uga taageene,
Tub qaloocan baa lagu waday Xamar ma taagnayne,
Sayyid Maxamed Cabdile Xasan Nuur
Kaadirka isbadal doonka ONLF, waxay dhaxgaleen ubucda xubnaha, taageerayaasha ONLF, waxaa kale oo ay kalsooni gashadeen dadwaynaha ka daalay qalooca dadka daalay iyo duqayda aan dhididdka lahayn.
Kaadirka Isbadal doonka ONLF, wali isma cadayn, waloow ay dhawaan shir ku qabteen Mineapolis xubno ka tirsan Kaadirka Isbadal doonka ah, oo ka kala yimid dalal dhawr ah.
Maxamed Cumar Cismaan, waxaa uu kolkii ugu horeeyey helay xanta Kaadirka Aqoonyahanka Isbadal doonka ONLF, June 2013. Waxaana uu sameeyey isku shaandhay kor ilaa hoos, laakiin dareenka kacdoonku wuu ka xoog badnayd yahay isbadal lagu sameeyo golaha dhexe iyo kaadirka.
Mar labaad waxaa uu Maxamed Cumar sameeyey isbadal dhinaca taageerayaasha ah, bishii November 2013 horaanteedii isga oo caydhiyey sideed xubnood oo shaqooyin hayey (8).
Bishii December horaanteedii waxaa VOA-da ka hadlay Cadaani hirmooge, oo sheegtay xil uusan Maxamed Cumar u dhiibin. Arintaasi waxay u cadaysay hogaanka ONLF in Kaadirka Isbadal doonku uu ka qoto dheer yahay isbadal maamul galayn ururka kor ilaa hoos.
Wali ma jirto cid cadayn karata xubnaha ka midka ah Kaadirka Isbadal Doonka ah ee ONLF. Waxaase la rumaysan yahay in ay ka maqan yihiin oo kaliya duqayda.
Xubno gole dhexe ah ayaa laga joojiyey shaqdii ay u hayeen ONLF, kuwaas xiligan haya hawsha ugu muhiimsan ee ONLF, Cadaani Hirmooge, Maxamed Ibraahin Mursal, Dhimbil, Axmed Majeerteen, Cabaas, bisle iyo Ina maalinguur, Ina Caleen, Kamas, Mujaahid iyo qaar kale sida la sheegay.
Waxaa shaqada Kaadirka isbadal doonka ah, inteeda badan wada dhalinyarada fanka, boggaga internetka iyo ururka dhalinyarta.
Dawlada Atoobiya oo si hoose ula socota dhaqdhaqaayada mucaaradka ayaa walaac badan ka muujinaysa kacdoonka ka dhex socda ururka ONLF.
London: Yaa la Aaminaa!